Sosaiti - Absolut Viajes | Kufamba Absolut (Peji 2)
Zita reCuba rinobva kupi? Chii chakabva zita rayo? Uyu ndiwo mubvunzo watichaedza kugadzirisa mune ino posvo.
Mabasa atenzi Alejandro Obregón
VaSpanish-Colombian Alejandro Obregón vanoonekwa semumwe wevapepanhau vakuru veSpanish-America vezana ramakore rechiXNUMX.
Isu tinotsanangura zvikonzero zvekusimudzira hupfumi muNorway, parizvino iri imwe yenyika dzakapfuma kwazvo pasirese.
Iyi yemitambo muEjipitori
Tsika munyika ino yakare uye inonakidza ine mamwe manzwi mazhinji kupfuura mapiramidhi. Imwe yacho ndiyo yemitambo muEjipitori.
Vanhu vakapfuma gumi muNew York
Nhasi tichazoongorora runyorwa rwevanhu gumi vakapfuma muNew York, matiri kutsvaga zita rinopfuura rimwe chete.
Muviri wakakwana, Runako muClassical Greece
Runako uye nemuviri wakakwana muClassical Greece. Ndiwo mamwe macanon atinawo nhasi?
Kupfeka sei muSwitzerland?
Mapfekero muSwitzerland mubvunzo usinganetsi kupindura. Fashoni yakajairika kuEurope yese. Chii chakasarudzika ndeyeiye chaiwo koshitomu.
Zvinodiwa zvekuroora muNorway
Isu tinoongorora zviri pamutemo uye zvehuchenjeri zvinhu zvinodiwa kuroora muNorway pamwe nedzimwe tsika dzakabatana neiri zororo.
Tsika yekuboora muIndia
India ndiyo nyika uko kuboora kunonyanya kuratidzwa setsika. Iwe unoziva here mabviro uye zvinoreva tsika iyi? Isu tichakuudza!
Hupenyu hwevarume muSparta
VaSpartan vaive varwi vakuru veGirisi yekare, asi yaive yakaita sei Sparta, yaive yakaita sei nzanga, vakadzi vayo, tsika dzayo?
La Pasquetta, iro rekuwedzera zuva revaItari paIsita
MuItaly, Muvhuro unotevera Pasika Svondo inozivikanwa seLa Pasquetta, ndokuti, "Pasika shoma."
Zuva raamai muCanada
Zuva raAmai muCanada izororo rakakurumbira uye rinodikanwa, rechipiri chete paKisimusi mukukosha nekutevera.
Ndeapi maHamptons muUnited States
Hamptons muUnited States akateedzana emisha midiki nemataundi ari kumucheto kwekumabvazuva kweLong Island.
Japan, nyika inosvibisa pasi rose
Japan ndiyo nyika inosvibisa pasi rose, izvo zvakakonzera hupenyu hwepamusoro uye hurefu hwekutarisira hupenyu.
Mari dzekare dzeEjipitori
Iwo maminendi emari yemari yeEkare yeIjipiti ingangoita ichangoburwa, nekuti ivo vanongoonekwa chete muchikamu chekupedzisira, icho chePtolemaic Egypt.
Chinese mukadzi tsika
Kunyangwe kufambira mberi kwakaitwa mumakumi emakore apfuura, vakadzi veChinese vanoramba vari mune imwe nzvimbo yekushomeka kuvarume.
Cordoba Mahotera anogadzirira Evha Idzva Idzva
Mahotera ekumusoro-soro eguta reCordovan ari kugadzirira kupemberera kweGore Idzva Evha nhevedzano ye ...
Iwe unoziva here kuti ndeupi mutsauko mukuru pakati pevasikana veChinese neJapan? pano tinotsanangura mashandiro echikadzi echina neJapan
Zvipfeko zveCuba, zvipfeko muCuba
Tsvaga izvo zvinowanzo fanika zveCuba zvevarume, vakadzi uye panguva dzakasiyana dzegore. Ndeapi machira eCuba anopfeka maCuba muzuva ravo zuva nezuva?
Tsika uye tsika dzeSweden nzanga
Tsika nemagariro muSweden akasiyana kwazvo needu, tinokuratidza zvakavanzika zvese zveprotocol uye nzira dzevaSweden
Midzi yemazita eIrish
Isu tinotsanangura midzi nekutanga kwemazita eIrish uye ndeapi mazita anonyanya kushandiswa muIreland
Kupfeka riini saree? Kubva kudunhu ripi iro rega rega rekupfeka reIndia? Isu tinoratidza zvese zvakavanzika zvehembe dzeIndia uye madhirezi echiHindu.
Zuva revakafa: huipi uye wit mune makumi maviri akakurumbira mazwi
Tinokuunzira makumi maviri emashoko akakurumbira akakosha ezuva revakafa, zororo rakakosha kwazvo kuMexico iro rinopembererwa musi waNovember 20.
14 zvinhu zvisingakwanise kuitwa muCuba
Nerondedzero iyi iwe uchaziva zvinonyanya kuda kurambidzwa zveCuba Waizviziva here kuti kuCuba unoda mvumo yakakosha yekuuraya mombe yauinayo?
Kunyoresa pamutemo hupfambi muNetherlands, ndozvazviri
Chipfambi chakanyoreswa zviri pamutemo muNetherlands musi waGumiguru 1, 2000 pakarambidzwa kurambidzwa kwemahure kubva muna 1911.
Simba masosi muVenezuela
Venezuela inyika yakapfuma musimba rinowedzerwazve senge mamhepo, kana epaneru, asi zvakare akapfuma musimba risingadzoreke
Zvekurima zvekurima muNetherlands chikamu chiri kuwedzera
Kurima kwehupenyu muNetherlands ndeye yakanakisa chigadzirwa chemhando, kukosha kwakanaka kwemari uye kuronga uye kutendeseka kwehurongwa.
Chitendero uye vanamwari vechiGiriki
Poseidon, mukoma waZeus, anotarisira kwete chete zvegungwa, asiwo nezvekudengenyeka kwenyika nemabhiza. Anokodzera…
Nzvimbo dzakanakisa uye nharaunda dzevanhurume nevanhukadzi muAmsterdam
Nzvimbo dzakatenderedza Zeedijk ndeimwe yeanonyanya kufarirwa muAmsterdam nekuda kwezvitoro zvaro zvakawanda uye ...
Holland, piyona nzanga mukugamuchirwa kwevabereki
Netherlands ipiyona pazvinouya pakupa kodzero yekurerwa kune ngochani, muna Kubvumbi 2001 mutemo wakatanga kushanda, muenzaniso kune dzimwe nyika.
Sangano rezvematongerwo enyika reGreek
Hellenic Republic ine nzvimbo inokwana 132.000 mativi emakiromita. Gungwa riripo kwazvo muGrisi nemahombekombe ...
Kuvhiya kwepurasitiki kuri kuwedzera muChina
China inotevera Japan neSouth Korea mumafashoni ekuvhiya epurasitiki kuvhiya
Venezuela mimhanzi yechinyakare
Isu tinoongorora zvakavanzika zvemimhanzi yechinyakare yeVenzuelan uye zviridzwa zvakajairika zveVenzuelan. USASHURE nziyo dzeVenezuela.
Iyo ngano yeSwan, Catfish uye Crab
Iyo ngano yeSwan, Catfish uye Crab uye Dzidziso Yayo muRussia Yekare
Japanese Urban Legends - Musikana anobva kuHoro
Musikana ari mugomba ndomumwe wengano dzekuJapan dzemaguta. Pano tinokuudza iwe nezve izvo.
Vanhu vari sei kuAustralia?
Mune ino post tinoziva zvishoma nezve Australia uye zvakaita maAustralia, pamwe nehumwe hunhu hwavo.
Mitemo yekuzvibata muRussia
Mushanyi wese ane pfungwa dzekuenda kuRussia anofanirwa kuziva kuti inyika ine imwe xenophobia ...
Makumi makumi matanhatu anogona kuve chinhu chekare, asi mahipi haasi. Nemamwe mararamire akagashira iyo ...
Dutch shangu dzemapuranga
Shangu dzematanda? Chimiro cheDutch nhaka? Pamwe hapana kana mumwe munhu anogona kutipa imwe ...
Tsika dzeRussia dzaIvan Kupala
Kubva panguva dzekare vanhu vese vepasi vakapemberera kupera kwaJune panhongonya yezhizha. The…
Kudzidza muNetherlands: Eindhoven technical University
Kufunga nezvekudzidza muNetherlands? Kunze kwesangano rayo rechinyakare nemagadzirirwo emhepo, cheeses uye clogs, iri ...
Iyo inodhura kwazvo china porcelain mug munyika
Antique Chinese porcelain mug inotengeswa muHong Kong ne $ 700
Delft University of Technology yunivhesiti yemazuva ano ine hupfumi tsika. Iwo masere masere masimba uye anopfuura makumi mana ...
Tsika nehunhu muRussia
Musiyano uripo pakati petsika dzeEuropean neRussia wakakura zvekuti unogona kunyora mabhuku mazhinji nezvavo….
Yakanakisa Medical maYunivhesiti muRussia
Dzidzo yepamusoro yeRussia yekurapa yakawana mukurumbira unoshamisa padanho repasirese nekuda kwenzvimbo dzakakwira ...
Iwo akanakisa mafirimu eSweden enguva dzese
Iyo Swedish Film Institute ichangobva kuburitsa runyorwa rweakanakisa mafirimu ...
Svika pakuziva iyo Russian Federation
IRussian Federation kana Russia ndiyo nyika hombe panyika. Inovhara 1/8 yepanyika ...
Dzidzo muCanada inokosheswa uye inotariswa zvakanyanya kuhurumende yeCanada. Nepo iyo system ...
Yekare Russian tambo zviridzwa: Kankles
MaKankles chiridzwa chemimhanzi cheLithuania chakatangira kubva kumhuri zither. Chimbo chacho ...
MaDutch vanhu vanoreba uye vane hutano
Ivhareji uremu hwevarume nevakadzi muNetherlands hwakawedzera nekukurumidza kupfuura makumi maviri emakore apfuura mukati ...
Zvigadzirwa zveKare China
China, imwe yemagariro makuru ekare, yakatipa nhaka huru nezvakawanda zvakagadzirwa pakati payo ...
Mate, chinwiwa chinwiwa cheArgentina
Kunyangwe pakutanga pekutaridzika inoita senge tii, asi musanganiswa wacho ndeimwe yemitambo inowanzoitika muArgentina ...
Venezuela, nyika ine tsika dzakasiyana
Venezuela inyika inotaura chiSpanish, ine huwandu hwevanhu vane mamirioni 25,8. Vagari venyika ino ...
Jinjiang, guta guru reshangu dzeChinese
Inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemahombekombe eChina mudunhu reFujian, Jinjiang City inotanga…
Cuban mimhanzi uye pesvedzero yayo munyika
Mumhanzi weCuba, kana mimhanzi yeAfro-Cuban, yanga iine chinzvimbo chakakosha musimba repasirose yemimhanzi pamwe ne ...
Tsika dzakanaka muHolland
Sangano reDutch rakaringana uye razvino. Vanhu vacho vane mwero, vanoshivirira, vanozvimirira, vanozviriritira, uye vanoita mabhizimusi. Ivo vanokoshesa dzidzo, ...
Iyo ine simba Inca Humambo
Iwo maIncas yaive budiriro muSouth America iyo muzana ramakore rechi14 raive dzinza diki re ...
Madzitateguru eIncas vaive vavhimi vaibva kuAsia vachiyambuka Bering Strait. Makore anodarika zviuru makumi maviri ...
Chipfeko chemukati cheChina chekare
Chinese zvipfeko zvemukati munguva dzekare
Chaizvoizvo zvinwiwa zveRussia
Russia inoonekwa seimwe yenyika nhatu dzepamusoro dzekumwa tii, pamwe neGreat Britain neJapan. On…
Russian echinyakare emhizha
Mhizha dzeRussia chikamu chetsika dzevanhu vavo vane hunyanzvi hwakaendeswa kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa….
Vatasvi vemabhiza maMongolia
Ipfupi nhoroondo yevanhu veMongolian, kuChina
Chikafu cheRussia, chakawanda uye chine hutano
Haisi pane iro runyorwa rweakanaka epasi kicheni, zvisinei, izvo zvekuRussia chikafu chisipo ...
Maguta makuru emazuva ano eChina
China ine maguta azvino uye ane simba akasimuka muAsia kwezana ramakumi maviri nemasere.
Inowanikwa pabani pamhenderekedzo yekuchamhembe kweSouth America, guta guru reVenezuela, ...
Maguta akanakisa eRussia kurarama nekushanda
Zvinoenderana neongororo yakaitwa nekambani yeMercer, iyo yakatsaurirwa kuongorora maguta epasi achitsvaga ayo ...
Yemazuva ano dutch zvivakwa
Zvivakwa zvemazuva ano muEastern Docklands, Amsterdam Mumakore gumi nemashanu apfuura, Holland yava imwe ye…
Sweden, nyika yemasango nemakungwa, zvakare ine maguta ane chipatapata uko kwekucheka-kumucheto dhizaini inosanganisa ...
Chikafu cheSweden paKisimusi
Manheru eKisimusi muSweden ndipo panowanikwa chikafu chikuru pamatafura. Izvi zvinowanzo "julbord", ...
Krisimasi tsika muRussia
Munguva dzeSoviet Union, Kisimusi yaisapembererwa zvakanyanya. Gore Nyowani chete ndiyo yaive nguva ...
Balalaika Chiridzwa chine tambo chakakurumbira muRussia, chine hunhu hwetatu uye tambo nhatu. The…
Mitambo yechinyakare yeRussia
Mutambo wechiRussian wevanhu kutamba wakapamhama uye wakasiyana senyika yacho pachayo. Kunyangwe vazhinji vatorwa ...
Kutamba kwetsika dzeRussia: Kamarinskaya
Kamarinskaya idhanzi revanhu vechiRussia, rinozivikanwa nhasi sekuumbwa kwemunyori weRussia ...
Mhemberero huru dzeEjipitori
Egypt inoshamisa nyika yeArabhu ine mitambo yakawanda uye mhemberero. Mimwe yacho ndeyezvakaitika kare, mimwe mitambo yemazuvano uye ...
Tsika muChina: Iyo Mid-Autumn Mutambo
Mumwe wemitambo yechinyakare muChina yose inopembererwa pazuva regumi neshanu remwedzi wechisere wekendendende yemwedzi, ...
Tsika dzeCuba magitare: maCuba tres
Chinhu chekutanga kuti unzwisise nezve maCuba tres ndechekuti chiridzwa chine mutsindo. Kunyangwe ichiita kunge ...
Varongo muChina yekare
Varongo nemadzimai muChina yekare
MaJute, vekutanga vagari veJutland
MaJute ari pakati pevanhu vekutanga vechiGerman kutora nzvimbo yenhasi Denmark. Zvinoenderana nezvakanyorwa zve ...
Madhongi eRussia anogadzirwa sei?
Zvinotora hunyanzvi hwakawanda kugadzira Russian nesting doll yakaiswa. Pachivanhu, matryoshka madhongi akagadzirwa ku ...
Lao Zi ndiye akagadzira chiTaoism uyo ainzi Li Er, naDan semazita ake. Akanga achifunga ...
Green negoridhe, iwo mavara epasirese eAustralia
nyika mavara eAustralia
Zvipfeko zvechiGerman zvechiGerman: iyo Lederhosen uye iyo Tracht
Kunyangwe hazvo Germany isina kumbobvira yaonekwa zvakanyanya mumafashoni, zvipfeko zvevanhu uye zvipfeko zvechinyakare hazvina ...
Michato yeRussia yakadii?
Michato yeRussia inopembererwa nenzira hombe. Iyo kukura kwemhemberero uye kunyatso kwegadziriro chete ...
Midziyo yekicheni yeRussia
Izwi rekuti "golubtsy" kana rakaiswa kabichi kazhinji rinodzosa ndangariro dzekugadzira chikafu cheRussia. Kubva pane yakapusa ...
Maitiro pane chikafu cheCuba
VaSpanish vasati vasvika kuCuba, maIndia eCuba aibata hove nekuvhima chikafu chavo. Vakadya kubva ku ...
Mhando dzeCuba chikafu
Chikafu cheCuba musanganiswa wechiLatin, chiAmerindian uye chikafu cheAfrica chinosanganisira kushandiswa kwenyama, bhinzi ...
Zvimwe zvinhu zvinogumbura maJapan
Vazhinji vatorwa vanoenda kuJapan kekutanga vanofanirwa kuyedza kungwarira, nekuti maJapan ari ...
Kudya kwemangwanani muRussia: Zavtrak
Vanhu veRussia, sedzimwe tsika zhinji, vanowanzo farira kudya katatu pazuva: zavtrak kana…
Zuva revana muCuba
Kugutsikana kuti nyonganyonga yenyika kana yeumambo blockade haizombobvise kunyemwerera kubva kumeso kwake ...
Russia, zviratidzo zvayo uye nhoroondo
Nyika yega yega ine zviratidzo zvenyika senge rwiyo uye mureza. Russia ine mucherechedzo uyo ...
Vabati veHolland: Beemster
Iyo nyowani uye nehungwaru yekufungidzira nzvimbo yeBememster Polder yanhasi yaive neakadzama uye anogara kwenguva refu mapurojekiti ...
Munyika dzekuchamhembe kweAmerica senge Canada kana USA, Zuva raAmai mutambo we ...
Zuva raamai muSwitzerland
MuSwitzerland, Zuva raAmai rinopembererwa Svondo rese rechipiri muna Chivabvu uye rinotariswa ...
Zuva revashandi muJapan
May Zuva nderimwe remazuva ayo nyika zhinji pasi rose dzinopemberera Zuva re ...
Vashoma uye vashoma vasikana vechikoro veJapan vanopfeka yunifomu yemafambisi echikepe
Vashoma uye vashoma vekuchikoro vekuJapan vanopfeka yunifomu yechikepe, inozivikanwawo se "Sailor Fuku."
Rothenburg, iro ngano guta iro rinogara Pinocchio
Germany ine nzvimbo dzekurota dzinova nzvimbo dzinoshamisa dzemarudzi ese emafirimu. Saka Rothenburg, yekare ...
Australia nedambudziko rehembe dzayo dzechinyakare
Australia ine chipfeko chetsika here?
Mutengo wekugara muHavana
Kune kutanga, kune mbiri yekubhadhara uye mutengo wemitengo. VaCuba vanofanirwa kubhadhara mumari yavo kuti vatenge mu ...
Chinatown yeSydney, yakakura kwazvo muAustralia
MaChinese ari mamirioni nemamiriyoni munyika mavo asi vari pakati penharaunda dzakatama zvakanyanya ...
Chipfambi chinokura muAustralia
Chipfambi chakura kupfuura nyika. Kune rimwe divi, ibasa risingade chero kugadzirira kwepfungwa ...
Siberia, kana zvakare North Asia, North Asia kana North Asia, ndiyo East Asia chikamu cheRussia, a…
Zuva Revanhukadzi Zuva muCuba
International Women's Day inopembererwa kuCuba musi waKurume 8 semunyika zhinji ...
Ida maererano neChina neChina
Chirevo chekupedzisira 2011-2012 ongororo yeChina Maitiro eRudo neMuchato yakaburitswa muChina ...
Vanyori vakakurumbira muSweden
Astrid Lindgren ane hunhu hwake Pippi Longstocking, anogona kunge ari mumwe wevanyori vanonyanya kuzivikanwa ...
Kuporesa zvivakwa zveChinese radish
Kune miriwo mizhinji ine kurapa uye inobatsira zvinhu zvemuviri wemunhu. Uye, mumwaka wechando, muChina, ...
Kana isu tichironga rwendo, kuziva kana kudzidza nezvetsika dzatinoenda kwakakosha kuti tinakidzwe zvizere neyedu ...
ZvekuCanada zvinodyiwa zvekudya zvinosiyana zvishoma kubva kudunhu kuenda kudunhu, uye zvinokanganiswa zvakanyanya nenhaka yavo ...
Akanakisa Chinese maUniversity evatorwa
China, nyika ine hunhu hunoshamisa uye nhoroondo, yakwezva vazhinji vekunze kuti vagare kune zvimwe zvidzidzo. The…
Nhoroondo yeCuba baseball
Cuban baseball semutambo ine mavambo ayo mumutambo weBatos uyo maAborigine eCuba aimbotamba, ...
Misanganiswa yakavhenganiswa pakati peChinese neRussia
Pfungwa yakajairika ndeyekuti maAsia havadi kuroora vekuMadokero. Pamwe vakadzi ...
Tsika uye tsika dzakanaka muSwitzerland
VaSwitzerland vanokoshesa kutendeseka nekushivirira. Vanodada nekusarerekera kwavo uye kusimudzira runyararo ...
NaIvan anotyisa, mambo anozivikanwa nehunhu hwake uye rudo rwehunyanzvi, zvakave zvakajairika kuva ...
Yekutanga mitambo yeRussia
Mutambo weRussia uzere nezvishamiso: nhangemutange dzeTroika dzinoitirwa kuwana mukurumbira kuve chikamu che ...
Nekudaro, Venezuela ine dzimba dzekumaruwa mumapani, mudunhu reAndes, uye munzvimbo yeGuyanas, iyo inomiririra mararamiro ehupenyu, ane hupenyu hwakasiyana kwazvo nedunhu remaguta eVenezuela neguta rayo Caracas, sezvo vaine zvakawanda yechinyakare chouviri zano. Kuuya kwechangobva kuitika kwevatorwa vekumaruwa vese vanobva kuVenezuela nekune dzimwe nyika kwakakanganisa mamiriro emumaguta ematunhu aya, kunyanya mumataundi ekumaruwa.
Chimiro chehurumende yeCanada
Sisitimu yehurumende yeCanada hutongi hwegutsaruzhinji hwebumbiro rine Musoro weHurumende uye ...
Iyo Red Light Dunhu reAmsterdam, pakati pevatatu vanozivikanwa kwazvo pasirese
Red Light District, kana inozivikanwa Red Light District kune avo vasingatoziva, inzvimbo muAmsterdam inozivikanwa ne ...
Ivo gumi vane mukurumbira vePeruvia pasi
Kukunda kwemuimbi wePeruvia Gianmarco kuLatin Grammy Awards kwaive kwakakura, asi haisi yekutanga yePeruvia kuhwina ...
Vakadzi vane simba kwazvo veChinese
Une chero gadget kubva ku Huawei tekinoroji femu iri mumba mako? Zvakanaka, maneja mukuru wekambani ino, iyo CEO ...
Zafra, iro rechitanhatu guta rakanakisa kugara munyika yedu
Izvi zvinotaurwa muchidzidzo 'Hupenyu hwehupenyu chinzvimbo cheSpanish masipala' ('Chinzvimbo chehunhu hwehupenyu hwemasuwa ...
Halloween inopembererwa muCanada muna Gumiguru 31. Izuva rekupemberera husiku chete mugore ...
Iyo Hakka, isinganzwisisike yeChinese dzinza
China inoumbwa nemapoka mazhinji emadzinza uye kunyangwe ruzhinji iri dzinza reHan, kune mamwe akawanda. Zvimwe zvakaunganidzwa ...
Dzidzo uye zvirongwa zvemagariro mumaruwa eChina
Kugara mumakomo kugara kure nehupenyu hwemumaguta nekunakirwa kwayo. China inyika huru chaizvo uye ...
MaChina emadzinza mashoma: Maonan
Rudzi rweMaonan vashoma vanogara kunyanya muHuanjiang County mudunhu reGuxi, kunyanya mumatatu ...
Holland pakati penyika gumi dzinonakidza munyika
VaDutch vakatora chinzvimbo chepamusoro mumarudzi gumi epasi rose, maererano nesarudzo ichangobva kuitika. MaAmerican akavhota mu ...
Zvinosuruvarisa kune rusarura munzvimbo dzese dzenyika. Paive, pane uye ini ndinokahadzika kuti hamuna mu ...
Japan, nyika yekudengenyeka kwenyika
Nzvimbo dzinonyanya kukosha dzevashanyi muCanada
Canada ndiyo imwe yenzvimbo huru dzakasarudzwa kuenda kuzororo kuNorth America uye kunyangwe iine ...
Hupenyu hweCanada hwezuva nezuva
Kune avo vanosarudza kugara muCanada uye vane yavo yekugadzirisa nguva munzvimbo nyowani uye neitsva ...
China, dzimwe nhumbu dzevechidiki uye dzidzo yepabonde shoma
Kubata pamuviri kwevachiri kuyaruka idambudziko remazuva ano risingazivi miganhu. Chokwadi unozviona munyika yako wega zvese ...
Mhuri dzakakura muChina, muhurombo
MaChinese havadi mhuri dzine vana vazhinji uye kunyangwe aya mapoka emhuri ari iwo mushe kumutemo ...
Nhau huru dzeCanada
Canada ine yakakosha budiriro zvine chekuita nenhepfenyuro, ingave yekuteerera, yakanyorwa kana yedhijitari, iyo ...
Canada tsika dzakasiyana
Nyika ino ine hukuru hwakasiyana mutsika, kungave nekuda kwekusanganiswa kwayo kwenhoroondo pakati peChirungu neFrance tsika ...
Kutamba inzira yetsika nehunyanzvi kutaura kwakadzika midzi mukuziva kweRussia uye tsika dzakakurumbira. Zviri…
Baseball ndeimwe yemitambo yehunyanzvi inosarudzwa nemaCanada, nekuti pamwe chete nechando hockey ivo vari ...
Zvinetso zvakakomba zvemagariro muPhilippines
Rimwe rematambudziko akakomba akatarisana nePhilippines munguva dzichangopfuura rakabatana zvine chekuita nesangano rezvematongerwo enyika
Vanokudzwa muItari, chidzidzo chose
Kutaura nezveanokudzwa muItari kunopararira nekuti kunofanirwa kuyeukwa kuti kusvika pakubatana mune imwechete ...
Zuva raBaba muCanada
Zuva raBaba muCanada rinopembererwa nechido chikuru uye kufarira. Inorangarirwa paSvondo yechitatu ya ...
Chinese bhuru mifananidzo
Zvidhori zvebhotoro kana bota zvakakosha mukusimudzira pamweya kweTibetan Buddhism. Seakasarudzika hunyanzvi hwekuveza ...
ChiChinese hunyanzvi: zvivezwa zvemafuta
Sezvataona, zvivezwa zvemabhata chikamu chenhoroondo yeTibetan Buddhism. Maitiro ekutanga ane ...
Bhiza reDala, mucherechedzo weSweden
Bhiza reDala (ChiSweden: Dalahäst) chinyakare chakavezwa uye kupendwa chifananidzo chematanda chebhiza kubva ku ...
MuLondon kunyangwe magadhi anokwezva
Kutevedzera mutemo muLondon zvakare kukwezva kwevashanyi. Kubva kunzvimbo dzinochengeterwa nyuchi, vachengeti veTower yeLondon, kuburikidza nevarindi vehumambo vane ngowani yeganda ravo rebheya, kusvika kumapurisa emuno, anonzi mabhabhoti, mushanyi wega anozviremekedza anozotorwa mifananidzo padivi peumwe wavo.
Ndeapi akanakisa makambani ekushandira muIndia? (Chikamu 2)
Isu tinoramba tichisangana nemakambani akanakisa ekushandira muIndia. Ngatitangei nguva ino nekutaura Tata Kubvunza ...
Tsika dzechitendero: maChrist echibage nzimbe
Chibage chave chinhu chinokonzeresa mutsika pamwe nehupfumi kubatana pakati pevanhu venyika yeAmerica, ichitoshandiswa semari ...
Winfield, nhamba yeAustralia 1 fodya
Mumusika wefodya weAustralia mune mucherechedzo unotungamira uripo kubvira pakutanga kwema70s….
Mhemberero dzeCuba dzinopfuura kungoitirwa musangano mumugwagwa, vakadhakwa nemufaro uye nechikafu ...
Victor Emmanuel II, wekutanga mambo weItari
Munharaunda yangu mune mugwagwa unonzi Victor Manuel II uye nekuti ndiri kuda kuziva uye ndinoufarira zvakanyanya ...
Zuva reValentine rinopembererwa nechido chikuru muCanada. Vanhu vese vanoratidza rudo kune vavakaroorana navo ...
Matambudziko ezvehupfumi muAustralia nekuda kwenjodzi dzinongoitika dzega
Kana iwe uchironga kuenda kunoshanda kuAustralia kana chidiki cheanofarira, hafu mushanyi, hafu yakakandwa kuhove vamwe ...
Zvemagariro Networks muAustralia
Ino nguva isu ticha taura nezve kuvapo kwenzvimbo dzemagariro º muAustralia. Ngatitangei nekutaura kuti Australia inotungamira ...
Zvemagariro Media muIndia
Hapana mubvunzo kuti masocial network akachinja nyika, kusanganisira nyika yechiHindu iri kure, uye izvi ndizvo ...
Mamiriro ezvinhu epamuviri uye kubereka muIndia
Mukadzi wese ane nhumbu anoziva zvakakwana kuti kupera kwemwedzi mipfumbamwe iyo nhumbu inowanzo gara ...
Manuel Sosabravo, zvakasikwa zvemavara
Uku kubvunzana nemunyori ane mukurumbira wekuCuba Manuel Alfredo Sosabravo, uyo ave kusvitsa makore makumi masere ekuberekwa. Muna 80, iwe wakapinda ...
Dzidzo yebonde muChina, musoro wenyaya wose
Makumi mashoma apfuura vakadzi vaigara vachirasikirwa nehumhandara hwavo pahusiku hwemuchato. Hupenyu hwepabonde hwaive nekubereka mu ...
Iyo Tinder Bhokisi, Hans Christian Andersen
'La caja de yesca' kana 'Iyo tinderbox' sezita rayo rekutanga muChirungu iri, yaive imwe yenyaya dzekutanga ...
Nhasi zvinhu zviviri zvinozivikanwa maererano nechitendero muIreland: imwe, ndeimwe yenyika ...
Vatapwa veCuba uye vanozivikanwa
Fidel asati aita chimurenga chake, Cuba yaive yakasiyana zvakanyanya neiyo yatinoziva nhasi. Zvaive nani mune mamwe ...
Nei uchienda kuCuba?
Cuba haina kufanana chero imwe nzvimbo pasi. Chitsuwa ichi chiri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweGungwa reCaribbean, 145 ...
Cologne: yakaturika padlock pamusoro perwizi Rhine uye zivisa rudo rwako rwekusingaperi
Sezvakangoita muPont das Arts muParis, vadikani vanovhara rudo rwavo nekurembera padiki uye vachikanda kiyi ...
Nhaka yaPolicarpa Salavarrieta
Mugore rebicentennial reIndependence Independence, zvakakosha kuyeuka rimwe remagamba aro makuru, Policarpa ...
Tisati tataura pfupi nezve vezvenhau kuChina, isu tinofanirwa kutakura chimwe chinhu chiripo: hatisi mu ...
La Calera mabhati ekupisa, sosi yehutano
Muguta reChivay, mudunhu reArequipa, tinowana sosi yehupenyu uye hutano, mabhati ekupisa ...
Vanyori: Samuel de Champlain
Samuel de Champlain aive murume akakosha munhoroondo yeCanada nekuti ndiye aive nebasa rekutanga guta ...
Canada inoda vashandi vekurima
Gore rega rega huwandu hwevanhu vanobva kuGuatemalan mavambo vanosvika munyika dzeindasitiri senge Canada inowedzera zvishoma nezvishoma ...
Matambiro echiChinese echinyakare: Maogusi
Dhanzi raMaogusi idanho rekare rine zviuru zvemakore revanhu veTu vanogara mudunhu rekumadokero kwe ...
Qipao: iwo mupfekero weShanghai
Iyo Qipao (cheongsam) ipfekero yemukadzi ine hunhu hweChinese uye inonakidzwa nemukurumbira uri kukura munyika ...
Idzo dzimba dzevanhu vane mukurumbira vanogara muMiami
Isu takatokuudza kanoverengeka nezve kukwikwidza kukuru uko Miami kune zvimwe zvezvakanyanya kukosha ...
Zuva rababa muChina
Svondo inotevera Zuva raBaba rinocherechedzwa munyika makumi mashanu neshanu pasirese uye China iri ...
Maitiro ekudzivirira kubata pamuviri, maChinese varume havatori chikamu
China ndeimwe yenyika dzine huwandu hukuru hwevagari pasi rose. Mamirioni nemamiriyoni vanogara munharaunda yayo ...
David Manzur, icon yemifananidzo yeColombia
David Manzur anoonekwa seimwe yeanonyanya kukosha epurasitiki maartist mune yetsika nhoroondo yeColombia. Mabvazuva…
Han, iro rakakura kupfuura mamwe marudzi munyika
Rudzi ruzhinji muChina uye rakakura kwazvo pasirese nderudzi rweHan. 92% ...
Jaime García Serrano, nyanzvi yemasvomhu muColombia
Zvirokwazvo zita raJaime García Serrano harinyatso kuzivikanwa kune vazhinji veColombia, asi iri ...
Maitiro ekunyorera kwenzvimbo yekuchengetedzwa kwevanhu muCanada
Iyo Yemagariro Chengetedzo Nhamba ndeye yakasarudzika mapfumbamwe manhamba manhamba anoshandiswa kupa akasiyana akasiyana zvirongwa zveHurumende ye ...
Iwo maViking muSweden
Zita rekuti "Viking" rakatanga kushandiswa nevanyori vekunze muzana ramakore regumi nerimwe AD. Kwayakatangira ingangodaro ...
Matipi evashanyi kuenda kuJapan (II)
Matipi eVafambi veVadzidzi Vadzidzi dzimwe nguva vanogashira zvivakwa kumamiziyamu, kunyangwe dzimwe nguva zvidzoreso zvinongowanikwa ...
Mitauro yepamutemo yeCanada
Munguva yakapfuura, Canada yakagara nhaka dunhu rakakura uko mapoka maviri emitauro yakakosha kwazvo pasi rose akadzika midzi:
MaOlmec ndiwo aive budiriro yekutanga kukura muMexico munguva dzemuno. Tsika yavo yakabudirira mumatunhu ...
Zuva revashandi muChina
Zuva reVashandi izororo regore negore rinopembererwa kutenderera pasirese semhedzisiro yesangano ...
Zuva revashandi muCanada
Zuva reVashandi muCanada rakapembererwa paMuvhuro wekutanga waGunyana kuCanada kubvira 1880. Kwakatangira…
Qipao, Chinese zvipfeko
Nemidzi muzana ramakore rechi 17 China, iyo qipao inguo yakashongedzwa yevakadzi iyo ...
Italian National Nhabvu Vatambi, yeDolce & Gabanna
Kuenderera mberi nemakakatanwa anoitika muItari mushure memishumo yekushungurudzwa pabonde nenhengo ...
Iyo artisanal paradhiso nzira muEl Salvador
Iyi nzira inoumbwa nemataundi matanhatu: Cihuatán, Colima, La Palma, San Ignacio, Miramundo neCitalá Iko kushanya ...
El Salvador uye nzira yayo yekuchera matongo
Iyi nzira inoumbwa nenzvimbo dzakasiyana dzekuchera matongo dziri muDhipatimendi reLa Libertad uye muSanta ...
Hunhu hwechipfambi muEurope hunosiyana nenyika. Dzimwe nyika chiito chiri kunze kwemutemo ...
Chipfambi chiri pamutemo muNetherlands, muAmsterdam uye chikamu chikuru chakanangana neRed Light District uko ...
Canada neMamiriro ekunze
Mamiriro ekunze uye jogirafi yeCanada zvakakonzera zvakanyanya tsika netsika ...
Zvizhinji nezvemabasa aPicasso, paMetropolitan Museum yeArt
Imwe yemamiziyamu ane mukurumbira muNew York anovhura chiratidziro chitsva pane mumwe wevanyori vane mukurumbira ...
Tourism mabasa muAustralia
Sezvazvinozivikanwa, kushanya chiitiko chekurumbira kukuru nhasi, mazuva ese munyika dzese dzepasi ...
Lisbon iguta rakachengeteka here?
Nyaya yekuchengetedzeka munharaunda chinhu chinotinetsa isu tese, uye hapana guta riri pasi rino rinoregererwa ...
Ruzivo nezve zvipatara zveLisbon.
Kana tichishanyira nzvimbo nyowani tinogara tichizivisa isu nezvevashanyi zvinokwezva uye nenzvimbo dzinoda kushanyirwa. Nhasi, zvakadaro, ...
Canada pacific njanji: yeCanada njanji network
Kwemakore anopfuura zana nemakumi maviri eCanada Pacific Railway yanga iri mamiriro eCanada. Yakaverengerwa muna Kukadzi 120 ...
Samovar, iyo teapot yeRussia
Iyo samovar yakashanda seye teapot yeRussia kubva pakati pemakore ekuma1700. Muna 1800, samovar yaive ...
Zvinoda kuziva nezveCanada Beaver
Montreal payakabatanidzwa seguta mune jasi rayo rehondo, mufananidzo webeaver wakaonekwa. Sir Sandford Fleming ...
Mureza wepamutemo weCanada unozivikanwa seMaple Leaf, kana mureza wemashizha kana ...
Chimwe chiratidzo cheCanada: beaver
Sezvo nyika dziine rwiyo, mureza, mutauro uye mari yepamutemo, pane zvekare mhuka iyo ...
Nzvimbo Dzenhoroondo dzeCanada
Kune akawanda enhoroondo nzvimbo dzakakosha kwazvo kuCanada. Ivo vanopupura kunguva dzakakosha dzenyika ino uye ...
Iyo sangweji yeCuba
Iyo sangweji yeCuba mutsauko we ham uye chizi pakutanga zvakagadzirwa nevashandi veCuba, muCuba kana ...
Rwendo pfupi rweiyo nhoroondo yeCanada
Mundima yazvino yeCanada, zvisaririra zvekuvapo kwevanhu neyakare kupfuura makore zviuru makumi maviri zvakawanikwa ...
Tsika netsika zveTibet
Tsika dzeTibetan dzakagadziriswa pasi pesimba rehuwandu hwenzvimbo nenzvimbo dzemamiriro ekunze, dzave nekusimudzira kwe ...
MaVisa echinguvana ekupinda muCanada
Canada ndiyo imwe yenyika dzakanyanya kuwanda pasi rino, inopa kusangana kwemadzinza netsika zvisingawanzoonekwa ...
China, kutama kwemukati kubva kumaruwa kuenda kuguta
China inyika hombe ine maguta mazhinji nenzvimbo zhinji dzekurima. Rimwe rematambudziko ehupfumi pamwe nemagariro ...
Mutambi wechiChinese anozivikanwa kwazvo pasi rose, Gong Li
Ini ndakatanga kusangana nemukadzi uyu mufirimu Wives and Concubines many, many years ago. Inofanira kuva ...
Iyo Toyota fekitori muTahara
Tahara iguta rine maindasitiri riri muAichi, yakavambwa muna Nyamavhuvhu 20, 2003 nekuda kwekubatana kweAkabane ...
Emilio Yunis Turbay, anopayona mukudzidza kwemajini emunhu muColombia
Emilio Yunis Turbay akaberekerwa muTeincelejo, guta guru redhipatimendi reSucre uye anoonekwa seanopayona mukudzidza kwe ...
Marudzi eRussia: Dargins
Pakati pemapoka emarudzi eRussia, ayo akawandisa, maDargins ayo anogara muDagestan neRepublic of Kalmykia anomira….
Iyi Kukadzi 14 inopembererwa paZuva raValentine kutenderera pasirese uye Canada haisi iyo ...
Chuiwan, iyo Chinese bhora
Pakati pemitambo nemitambo yekare yechiChinese, Chuiwan anomira kunze (zvinoreva kuti «bhora rinorova») waive mutambo mu ...
Danish Nhoroondo Hunhu: Niels Bohr
Kubva kuAbsolut Denmark tinoramba tichizvipira kune akakosha manhamba ezvematongerwo enyika, sainzi uye nhoroondo yeDenmark, ...
Iyo Republic yeBuryatia
Republic of Buryatia iri pakati peSiberia uye iri padyo neLake Baikal. Huwandu hwevanhu i450.000 XNUMX ...
Masekete nezvitendero muJapan
Nhasi vanosvika mamirioni makumi mapfumbamwe vanhu vanozvitora sevaBhudha muJapan. Buddhism yakaunzwa kuJapan ku ...
Danish mitambo yechinyakare: Fastelavn
Isu tinoramba tichiongorora tsika nemitambo inozivikanwa yeDenmark, uye panguva ino tinoreva Fastelavn, mhemberero iyo ...
Iwo "maGreek runes"
Isu tinoenderera mberi tichitaura nezveVikings, nhoroondo yavo uye main adventures, uye nhasi tinofanirwa kupira mukana we "Runes ...
Babushka, iyo Russian Amai
Mumwe wevanozivikanwa veKisimusi vatambi muRussia inyaya yaBabushka, zvinoreva kuti Amai Vakuru ...
Kuchengeta Nharaunda muNew York
Kana munhu akafunga kuti United States ndiyo imwe yenyika dzinoburitsa magasi anosvibisa kwazvo, New York, ...
India, vanhu netsika dzavo
Vashanyi vakave nerombo rakanaka rekuenda kuIndia, vaigona kuona kuti zhinji dzetsika dzayo ...
Simon Bolívar Planetarium
Iyo Simón Bolívar Scientific Cultural Tourist Complex -CCCTSB- iri muLas Peonías Metropolitan Park- yakavhurwa mugore ...
Haida, vaAborigine veCanada
Nhoroondo yeHaida, iri boka rezvizvarwa rinogara mumakomo nemasango mudunhu re ...
Iyo ndeimwe yemavara ane mavara uye ecrobatic anozivikanwa pasi rese. Isu tinoreva iyo ...
Milan, Renaissance art uye Leonardo da Vinci
Paunoenda kunopotera kuMilan, kunyangwe kana usiri mudiwa mukuru wehunyanzvi, hazvigoneke kuzvibvisa uye usanakirwe ...
Danish mumhanzi: dombo, vanhu uye nziyo dzezana ramakore rechiXNUMX
Danish mimhanzi zvakare ine nzvimbo yayo muAbsolutDinamarca, uye sekutaura kwatakaita munguva yakapfuura nezve bhendi kubva ...
Milan nevanhu vayo vane mukurumbira: Giuseppe Verdi
Kana tichitaura nezveMilan nevanhu vayo vane mukurumbira, zviri pachena kuti chekutanga chinouya mupfungwa ndechekuti ...
Tsika dzeHupenyu hwezuva nezuva hweAustralia
Australia inomira pachena pasirese kuve imwe yenyika umo vagari vayo vanoratidza mwero wepamusoro ...
Muchato wakadii muPhilippines
Philippines inyika izere netsika uye nhevedzano yetsika dzinoratidzira vanhu vayo, mune zviitiko zvemagariro zvakaita semichato, maPhilippines anoteera chimwe chinhu senge yakateedzana mitemo kuti vazviite.
Kumusoro kwePhilippine Kunze kwenyika
Panyaya yekutengesa kunze kwenyika, Philippines inyika ine hunyanzvi hwepakati nepakati, hune hukama hwekutengeserana zvakanyanya neUnited States, Japan, Hong Kong, United Kingdom, Netherlands neTaiwan.
Quebec, pamwe neCanada, ine nhoroondo yekoloni shure kwayo, inogarwa nemaNorth America maIndia uye ...
Paticruzado, Imba yeZvinwi muSantiago de Cuba
Hapana mubvunzo kuti rum yeCuba ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye ane mbiri kwazvo pasirese. Hapana munhu ane ...
Mitemo yeColombian Caribbean
Iyo yese nzvimbo yemahombekombe yeColombia, yakashambidzwa neCaribbean Sea, inonzi Colombian Caribbean Dunhu. Kununurwa kwe ...
Kupfeka kweRussia -II
Iyo jasi ine zvidimbu zvitatu senge chena satin blouse ine juzi dzvuku uye ...
Nhoroondo yeRussia Ballet -I
Pakati pezana regumi nemanomwe century, pamberi pokutonga kwaMambo Peter Mukuru, kutamba muRussia kwaingovepo pakati pe ...
Iyo Jamaica Ruva muCuba
Kune ruva diki rerudzi rwakatsvuka rwakatsvuka zvino rwunopararira nemuminda yemichero uye nzvimbo dzeChitsuwa che ...
Shanyira iyo Shrine yePadre Pio
Iyo Padre Pio Chapel iri mutaundi reSan Giovanni Rotondo, kumaodzanyemba kweItari, uye iri ...
Carlos Vives 'mupiro kumumhanzi weColombia
Mumwe wevanonyanya kudiwa uye vane hushamwari vaimbi muColombia ndiCarlos Vives, tarenda rake uye charisma zvakamuita ...
Kuziva iyo Cuban slang
Mukati meupfumi hwemutauro unozivikanwa wechiSpanish ndeyekuti kwemazana emakore vanhu vakagadzirisa ...
Mutambo muLondon (II)
Kuenderera mberi nebasa iri rinodiwa uye rinoitwa neLondoners, ndinokuudza kuti mukati me ...
Marudzi uye zvipfeko zvavo
China, nyika ine nyika makumi mashanu nenomwe, ine dhizaini yayo yemapfekero pamwe nekushongedza kwayo kwe ...
CARICOM isangano renharaunda rinotsvaga kubatanidzwa pakati penyika dzese dzinoriumba. Zviri…
Zvipfeko zvakajairika zveCossacks
Icho chimwe chevanhu vatinonyanya kuratidza vanhu veRussia: maCossacks; kunyangwe nekuda kwake ...
Isu tinopa vhidhiyo yekutamba nekutamba kwevanhu veCossacks, iri churu-gore ramakore dzinofamba-famba uye ...
Bon Odori, iyo tsika yechinyakare
Bon Odori idanho retsika reJapan, ndiyo iyo inoshandiswa kutamba husiku, sezvo iri ...
Mumwe wevanhu vekare veChina ndiMiao. Vanopfuura hafu yavo vanogara muProvince ...
Bian Que, baba vechivanhu mushonga
Pasina kupokana, chinyakare mushonga wechiChinese une chiuru chemakore nhoroondo. Mumazana emakore aya, hunhu hwakawanda hwakasarudzika, avo vakaita ...
Algonquinos, vanhu vemuno
MaAlgonquins vanhu vekuCanada vanotaura mimwe mitauro yeAlgonquian. Mutsika nemitauro, ivo vari padyo ...
Iyo Ampay Carnival
Mukati meCuba nhoroondo, iyo yemidziyo yemimhanzi inomira kunze, ichatanga kubva pakutanga kwenheyo yayo ne ...
Victoria Day - Victoria Zuva I
Mutambo waMambokadzi Victoria unopembererwa muCanada nemusi wa24 Chivabvu, kupera kwa Chivabvu, mukukudza ...
Baltika, doro reRussia
Baltika doro idoro rechinyakare reRussia, ndiyo doro rayo rekushandisa rakakwira kupfuura mamwe ...
Zuva raamai muChina
Rimwe remazuva echinyakare munyika dzinoverengeka izuva raAmai, iro rinopembererwa mumwedzi ...
Chii chinonzi Tasajo?
Mukati meakasiyana eCuba gastronomy pane yechinyakare dhishi inonzi "Tasajo", iyo mavambo ayo akadzokera kumashure kune 1700-1800 century apo ...
Yangge, mutambo wekare
Yangge mutambo unozivikanwa wevanhu mumaruwa eChina. Yakagadzirwa nevanhu ku ...
Iyo Gulf yeBothnia
Iyo Gulf yeBothnia muganhu uri pakati pekumadokero kweFinland nekumabvazuva kweSweden. Pamusoro payo ...
Zvinokanganisa: Mamiriro Evanhu kana Kusarura muIndia?
Pakutanga takakurukura nyaya yakaoma yemakastasi muIndia. Isu tinozorodza ndangariro yako uye tinokuudza zvandinoziva ...
ChiHindu Chinodiwa uye maBrahmins
Iwe ungade here kuziva zvishoma zvishoma nezve kurongeka kwenzanga muIndia? Zvakanaka ngatitange nekutaura ...
Nokia, nhoroondo uye tekinoroji
Ericsson (izere zita Telefonaktiebolaget LM Ericsson) ikambani yemarudzi akawanda yeSweden mavambo yakatsaurirwa kupa michina uye mhinduro dze ...
Trepak, iyo yekutamba yeRussia
Iyo trepak idanho reRussia rinozivikanwa nekuratidzira simba rakakura uye rinoda kutsungirira kunokanganisa kubva kuvatambi. Mumhanzi, ...
Kazakhs, dzinza reRussia
VaKazakhs vanhu vanobva kuTurkic mavambo vanogara munzvimbo yeKazakhstan. Munguva yakapfuura vaive nemukurumbira ...
Makedheni heringi, kuravira uye tsika
MuSweden, kune dhishi risingadyiwe nevaSweden vese, asi, kunyangwe nezvose, iyo dhishi ine ...
Mutambo unoita basa rakakosha munharaunda yeDutch. Munguva yeMitambo yeOlympic, iyo European Championship kana iyo ...
Mitambo muChina (II)
Iyo mitambo yechinyakare nemitambo yeChina ndeiyi: wushu, taijiquan, qigong, Chinese chimiro kurwira-kuruoko, Chinese chess, ...
Iyo Madonnina, chiratidzo cheMilan
Iyo Madonnina chifananidzo chakavezwa chendarira chaGiuseppe Perego anomiririra Mhandara Assunta, inotangira muna 1774 ...
Chavín, tsika yevabereki yePeru
Iyo Chavín Tsika inomiririra tsika yemubereki yePeru. Inoenderana nenguva yekutanga yekubatana kwetsika dze ...
Iyo Monolithic Lanzon
Iyo inomiririra monolithic sandeel, mashanu metres kukwirira, inesimba anthropomorphic chimiro chinoratidzika kunge chinomiririra ...
Chancay, guta rechitendero
Iko iko iko kunongedzera kuRutsvene Svondo muPeru ndiAyacucho kana Tarma. Nekudaro, mumaguta akasiyana siyana seCancay ...
Rudzi rweHan ndirwo rudzi rwakakura kwazvo muChina, uye zvakare pasirese. Nezve ...
Iyo Zima Palace muSaint Petersburg
Iyo Winter Palace ndicho chivakwa chikuru cheSt.Petersburg Heritage Museum. Yakavakwa pakati pa 1754 ...
Nyamavhuvhu ndiwo mwedzi unodakadza maSweden kuroora. Munyika inozviti ndeyechienzi kune chitendero, ...
Doro ndicho chinwiwa chinodikanwa chevanhu veHolland. Iyo inonyanya kuzivikanwa pane dzese doro ndedzemuno ...
Tsika uye tsika dzevanhu veMexico
Vashanyi vakaita nzendo kuMexico vakashamiswa nedzimwe tsika idzo nzanga dzine uye kana ...
Tilak, iyo mole inopfekwa nemaHindu pahuma dzavo (Chikamu 1)
Kana paine mucherechedzo watinogona kuzvizivisa otomatiki tsika yechiHindu, ndiro diki dzvuku iro ...
Iyo nzira yechizi yeGerman
MuGerman, anopfuura zana nemakumi mashanu emhando dzechizi dzinogadzirwa nehunhu hwenharaunda yavo yekwatangira. Germany kwete chete ...
Kuvapo kweAsia muAustralia
Paunenge uchitora kufamba mukati meguta reAustralia, hauzoshamiswa nekuvapo kweAsia mumigwagwa, nzvimbo ...
Kagura, kutamba kweVamwari
Mukati mechitendero chechiShinto muJapan, zvinoratidzira kutamba kwavo. Uye mumwe wavo anonzi Kagura, uyo ...
Sinkuy, kutamba kwevaInca
Tsika dzenzanga yeJapan
Vazhinji vevashanyi vaenda kuJapan, vakakatyamadzwa netsika nemagariro ayo, kunyanya ...
Zera rakaderera kuti unwe doro muSweden
Pazera ripi raunogona kunwa doro mune yeSweden pub? Uyu mubvunzo uchabvunzwa nevazhinji, ...
Mhemberero iyi ndeyokutamba kwepanyama uine mutserendende uye unonakidza mutinhimira, zvinogona kunetsa kana kukwikwidza pakati pevatambi….
- Kubata Denmark iparadhiso yehove. Hapana rezinesi rinodiwa kune mumwe munhu hove. Iwe unongoda iyo ...
Iko hakuna chinhu chinonzi kukwana, izvo zviri pachena. Imwe nzira yekusarura ndeye kusiyanisa vanhu nekuvharira mu ...
Munzvimbo dzese dzepasi zvakajairika kuona mhando dzakasiyana dzekuki neIreland hazvisi izvo, mune izvi ...
Indian Tsika neSosaiti
India iri mudunhu reSouth Asia uye inotora yakawanda yeIndia subcontinent. Naiye ...
Mongolia ine 2.830.000 vagari, iyo inenge yechitatu (960.000) vanogara muguta guru, Ulaanbaatar. Pakazara, inenge ...
Dhiragoni Pit iri iri Fenghuangling, (padyo neWest Lake), kuyambuka musha weLongjing. Munguva dzeyakare, iyo ...
Mini dzimba muJapan
Isu tese tinoziva kuti muJapan mamiriro edzimba ane njodzi zvakanyanya mupfungwa yekuti ivhu rinodiwa kuvaka ...
Vagari veIndia, vanhu vetsika nemagariro
Kubva kunyika yakaita India tinokwanisa kuratidza zvinhu zvakawanda, asi pakati pavo tinowana vagari vayo, avo zvirokwazvo ...
Urombo muIndia, rimwe divi remari
Isu tese tinoziva maitiro ekuyemura zvishamiso zvezvivakwa muIndia, mahombekombe ayo, chikafu chayo chakanaka, asi dzimwe nguva kune ...
Minda yekofi yeFrance muCuba
Mazana emakore apfuura, apo shuga yanga isiri iyo yakakosha kugadzirwa muCuba, chitsuwa chakasangana nemhepo ...
Iyo jineteras uye pingueros
Nezuro ndanga ndichiona vhidhiyo yeterevhizheni nezve hupfambi muCaribbean, varume nevakadzi. Icho chiitiko chinoenda ...
Australia inyika-kondinendi ye4.000 km uye kunyangwe ichitariswa kubva pakuwanikwa kwayo senyika isingafadzi ...
Hupenyu hwehupenyu muCuba
Iyo indasitiri yekushanya inotevera chirevo chakakosha chehutano hweCuba: hutano ikodzero yevanhu uye ...
Nziyo yenyika yeSweden nenziyo dzayo
Canada nenzvimbo yayo yebhizinesi
Ichionekwa, Canada, imwe yenyika dzakagadzikana pasi rose, nekuda kwehupfumi hwenyika hwashandiswa, yakabatsira ku ...
Rwiyo rweNyika yeCanada nderimwe remakanaka kwazvo pasirese. Izvi zvinomiririra nyika yakakamurwa kuva ...
Canada uye ruzivo rwetekinoroji
Ruzivo ruzivo rwunogara rwuchichinja. Zvino nyika dziri kurwira kuti ndiani anopa kufambira mberi kwetekinoroji….
Mhemberero dzeSweden uye mazororo
Mukati medzetsika dzevanhu veSuceco, mhemberero dzayo nemhemberero zvinoonekwa mukati megore rose. Izvo zvinoshamisa Iyo ...
Iyo Toquepala Cave
Pano iwe unogona kuwana akasiyana emapako pendi anomiririra yekare kuvhima muAndes. Kune iyi fomu ye ...
Hakuna kwese kwese patafura yekudyira kuri kuita zveSweden, kunyanya mune toast….
Izvo vakadzi vanoenda kuAustralia vanofanirwa kuchengeta mupfungwa
Kuva mukadzi hakuna kufanana nekuva murume kana uchifunga zororo uine bhegi rako pabendekete rako….
Fried huku, chikafu chaHomer
Kangani nguva yatakaona mumabhaisikopo kana Homer Simpson pachake achidya mapapiro ehuku akaomeswa kubva mubhakiti….
Iyo Saint Petersburg Chikoro cheUnyanzvi
Iyo Imperial Chikoro cheArt. Yakagadzwa na Count Ivan Shuvalov mu 1757 pasi pezita reiyo Academy ye ...
Chitendero chipi chinonzi neveCuba? Eya, senge chero nyika yakakwenenzverwa neSpanish, chiKatorike chakapinda mukati mayo ...
Magoridhe egoridhe, tsoka diki pasi rese
Imwe yetsika dzechiChinese dzakanyanya kundibata ndichiri mudiki yaive yeiya inonzi "Golden Lotus", iyo ...